I-Tadalafil Powder ehamba phambili (171596-29-5) i-China Factory
Singumkhiqizi omkhulu we-Tadalafil powder e-China
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile kuyinkinga ejwayelekile yokuvusa ucansi kwabesilisa ethinta cishe amaphesenti angama-52 wamadoda angaphezu kweminyaka yobudala eyi-18, emhlabeni jikelele. Ukushintshashintsha ngamandla, ukungasebenzi kahle kwe-erectile kuvame ukubangelwa ukwehla kwegazi kuye emithanjeni yegazi le-penile, okuyisinyathelo esikhulu ekukhiqizeni ukwakhiwa.
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile yisifo esilawuleka ngokuphelele futhi eselaphekayo ngemithi ehlukene ebhekise kuma-enzyme akhethekile odongeni lwemithambo yegazi ye-penile. Omunye wemithi enamandla kakhulu ye-ED yi-Tadalafil powder nengxenye yokuphila kwamahora we-17.5.
Yini iTadalafil Powder?
I-Tadalafil Powder ingeyesigaba sezidakamizwa ezikhuthaza ezocansi njengoba kungumuthi owenzelwe amadoda angaphezu kweminyaka eyi-18, ehlushwa ukungasebenzi kahle kwe-erectile. I-Tadalafil, noma (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6 , 3,4] pyrido [1,4-b] indole-XNUMX-dione umuthi ofana neSildenafil noma iViagra, usebenza, kodwa uhlukile ngesakhiwo. I-Tadalafil nayo yehlukile emithini ejwayelekile yokukhubazeka kwe-erectile, i-Viagra, ngamandla njengoba inamandla amakhulu futhi isebenza kahle kunalezi zokugcina.
I-Tadalafil Powder iyisidakamizwa se-PDE5 inhibitor, okusho ukuthi ihlose i-enzyme ye-PDE5 etholakala kumaseli wemisipha abushelelezi wemithambo yegazi ye-penile. Umsebenzi wokuvimbela umuthi uzuzisa impela njengoba inhloso enkulu ye-enzyme ukudala i-vasoconstriction, ethi ngemithambo yegazi ye-penile, iholele ekwehleni kokugeleza kwegazi futhi ngenxa yalokho kungasebenzi kahle kwe-erectile.
I-Tadalafil Powder yenziwa yi-Pharmax Lifesciences futhi ingasetshenziselwa ukwelashwa okungaphezu nje kokungasebenzi kahle kwe-erectile. I-Tadalafil Powder nayo inqunyelwe amadoda aphethwe yi-benign prostatic hyperplasia ngisho ne-pulmonary arterial hypertension. Kodwa-ke, iTadalafil Powder ayisebenzi ekwelapheni okunye ukuphazamiseka kokuvusa ucansi kwabesilisa nabesifazane.
I-Tadalafil iyi-PDE5 inhibitor enamandla, etholakala ngezindlela ezahlukene nemithamo, okwenza ukusetshenziswa kwayo kube lula ezigulini. Lo muthi utholakala ngohlobo lwamaphilisi noma ama-capsule, ngomthamo kube ngu-5 mg, 10 mg, no-25 mg. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi umthamo weTadalafil wehlukile ngokuya ngenkampani yokukhiqiza.
I-Tadalafil iyatholakala nefomu le-powder, yize ithengiswa kakhulu ukusetshenziswa ezimbonini. Lesi yisona sizathu esikhulu ngemuva kokuthi iTadalafil Powder yezitolo ezidayisa kakhulu idume kakhulu ngaleli fomu lomuthi. Leli fomu livame ukuthengiswa ngeziqukathi ezingama-25 kg kuye kuma-50 kg, kuya ngemfuneko yokuthengiselana.
Umthamo ojwayelekile we-Tadalafil powder, ukuqala ngawo, yi-10 mg. Umthamo omkhulu, kungakapheli amahora angama-24, ungama-20 mg, futhi ukweqa lo mkhuba akunconyiwe.
Le mithi iphephile ukuthi ingasetshenziswa ngabantu njengoba ithole ukuvunyelwa nokuvunyelwa yi-FDA kusuka kuziphathimandla Zezempilo zaseNdiya, zaseCanada, zase-Australia nezaseBrithani. I-FDA ivume ukusetshenziswa kwamaphilisi e-Tadalafil ngonyaka we-2002, futhi kungekudala, ukusetshenziswa kwe-tadalafil powder kwavunyelwa yi-FDA futhi.
Ifektri yomkhiqizi we-Tadalafil powder ikhiqiza imithi yokwelashwa kuphela ngokunemba okukhulu. Abakhiqizi bakuhlonipha kakhulu ukuphepha kwabantu, okwenziwa kucace kakhulu ngamandla, ukuphepha nokusebenza ngempumelelo komkhiqizo wokugcina.
Isebenza kanjani i-Tadalafil Powder?
I-Tadalafil Powder iqukethe iTadalafil, inhlanganisela ye-PDE5 inhibitor eyaqale yacwaningwa futhi yenziwa nguGlaxoSmithKline ngemuva kokutholakala kweSildenafil, indawo efanayo. USildenafil, ngakolunye uhlangothi, ekuqaleni kwakucwaningwa njengokwelapha i-angina kanye nomfutho wegazi ophakeme kodwa isifundo sonke sachithwa ngemuva kwemiphumela ehlulekile ezigabeni zokuqala zocwaningo. Kodwa-ke, lapho kubuyekezwa, kutholakale ukuthi uSildenafil angakwazi ukukhiqiza ama-erections uma iziguli zivuselelwe kahle ngokocansi.
Njengoba i-sildenafil iyi-PDE5 inhibitor, uGlaxoSmithKline uthathe isinqumo sokwenza ukusesha okubanzi kakhulu kumakhemikhali anendlela efanayo yokusebenza njengoSildenafil. Lolu cwaningo luholele ekutholeni nasekuthuthukiseni iTadalafil.
I-Tadalafil iyi-PDE5 inhibitor enamandla nge-half-life yamahora we-17.5 ethatha cishe amahora angama-96 ukucacisa ngokuphelele emzimbeni womuntu. Uma kuqhathaniswa nepilisi ejwayelekile eluhlaza okwesibhakabhaka, i-Viagra, esebenza kuphela emahoreni ama-3 kuya emahoreni ama-4 ngemuva kokungenisa, iTadalafil iphuma phezulu.
Indlela eyinhloko yokusebenza komuthi ivimbela i-enzyme ye-PDE5 ekhona kumaseli wemisipha abushelelezi wemithambo yegazi ye-penile. Ukuvinjelwa kwale enzyme kuholela ekuvuselweni kwe-vasodilation futhi ekugcineni, kukhuphuke ukugeleza kwegazi emithanjeni yegazi, ezungezwe yi-corpus cavernosa. Lo msipha wepenisi, lapho ufakwa ngaphansi kwengcindezi ngokwanda kokugeleza kwegazi, ucindezelwa ume kahle, obizwa ngokuthi ukwakhiwa.
Kodwa-ke, imisipha ye-penile, i-corpus cavernosa ukuze ibe ngqo, idinga ukuqala ikhululeke ukuze imithambo yegazi ikwazi ukwelula futhi ithole ukufakwa okuphezulu kwegazi. Lokhu kuphumula kwemisipha ebushelelezi futhi kungumphumela wokuvimbela i-enzyme ye-PDE5, yize ingaqondile. Ukuvinjelwa kwemiphumela ye-PDE5 ngenani elikhulile leGuanosine MonoPhosphate noma i-GMP, okubalulekile ekuphumuzeni kwemisipha ebushelelezi, njenge-corpus cavernosa.
Kodwa-ke, lokho akusikho ukuphela kokusetshenziswa kanye nendlela yokusebenza kweTadalafil Powder. Imithi yokwelashwa kuphela isetshenziselwa i-benign prostatic hyperplasia, ukuphazamiseka komchamo okubangelwa ukwandiswa kwe-prostate gland nokwethula njengokuchama okubuhlungu. Indlela yokusebenza yokwelashwa kwe-prostate gland ekhulisiwe nayo ngamazinga akhuphukile e-GMP kumaseli wemisipha abushelelezi. Ukuphumula kwalawa maseli kuvumela ukudlula kalula komchamo futhi kuvimbele ukugcinwa komchamo nobuhlungu.
I-Tadalafil Powder nayo inqunyelwe umfutho wegazi ophakeme wamaphaphu, njengoba umphumela we-PDE5 wokuvimbela ungagcini ngokunyusa ukugeleza kwegazi kepha futhi wehlisa nomfutho wegazi, ozuzisa kakhulu ekwelapheni i-PAH.
Yini iTadalafil Powder Engasetshenziselwa yona?
I-Tadalafil Powder isetshenziselwa ukwelashwa kwale mibandela elandelayo:
I-Benign Prostatic Hyperplasia
Umfutho wegazi ophakeme we-Pulmonary Arterial
Yize kwenziwa ucwaningo ngokusetshenziswa okusha komuthi, okwamanje kuhloswe kuphela ukuthi kunikezwe amadoda angaphezu kweminyaka eyi-18, ahlushwa esinye sezifo esishiwo ngenhla. Ngokuvamile, umuthi usetshenziselwa ukwelashwa kokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Izinzuzo zeTadalafil Powder
I-Tadalafil inezinzuzo eziningana ngokuzimela kwayo futhi uma iqhathaniswa namanye ama-PDE5 inhibitors asekilasini lezidakamizwa ezivuselela ucansi. Lo muthi unamandla futhi uhlala isikhathi eside njengoba kuthatha amahora angama-36 ukuthi ususwe ohlelweni, kuphela okungatholakali ngemuva kwamahora angama-96. Imiphumela yomuthi iyabonakala futhi ibonakale cishe emizuzwini engu-20 kuye kwimizuzu engama-60 ngemuva kokungeniswa, kanti iTadalafil powder ihlala isebenza cishe ngamahora ama-3 kuya emahoreni ama-4 ngemuva. Kubalulekile ukusho ukuthi umsebenzi womuthi awulingani nganoma iyiphi indlela nesikhathi sokwakhiwa.
I-Tadalafil Powder ayikwazi ukukhiqiza ukuvinjelwa okuzenzakalelayo futhi idinga ukukhuthazwa okufanele ngokocansi nokuvusa kwayo ukuze isebenze ekukhiqizeni ukwakhiwa. Uma kunikezwa ukukhuthazwa ngokocansi phakathi kwamahora amane ngemuva kokufakwa komuthi, umuthi ungakhipha ukwakheka futhi unciphise izimpawu zokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Lesi sidakamizwa esikhuthaza ubulili sisebenza impela ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile ngenxa yendlela esebenza ngayo isikhathi eside, okwenza kube yisidakamizwa esithandwayo kwabaningi abaphethwe ukungasebenzi kahle kwe-erectile ne-benign prostatic hyperplasia. I-Tadalafil Powder ingahlanganiswa neTamulsin, esinye isidakamizwa esinamandla sokwelashwa kwe-benign prostatic hyperplasia yize ukusebenza kwale ngxube yezidakamizwa kusacwaningwa kuhlolisiswa.
Isilinganiso esifanele seTadalafil Powder
I-Tadalafil Powder, njengoba kushiwo ngenhla, ivame ukuqala ku-10 mg njengomthamo ophansi kakhulu ongaba khona. Ngemuva kokungenani isonto usebenzisa umuthi, umthamo ungancishiswa, ukhuphuke, noma ugcinwe emazingeni afanayo kuya ngemiphumela. Kodwa-ke, kubalulekile ukukhumbula ukuthi lo muthi yimithi kadokotela kuphela okufanele isetshenziswe kuphela lapho idingeka. Kufanele futhi isetshenziswe kanye kuphela emahoreni angama-24 ukuze kungakhuliswa imiphumela emibi yomuthi.
Ingozi yomthamo ongabanjwanga womuthi okufanele uphuzwe kuphela lapho kudingeka khona cishe awutholakali nokho, kubalulekile ukucacisa imihlahlandlela yesilinganiso esilahlekile. Lokhu kungenxa yokuthi umuthi unqunyelwe ukusetshenziswa nsuku zonke, okungenani kathathu ngosuku lapho usetshenziselwa ukwelashwa kwe-pulmonary artery hypertension kanye ne-benign prostatic hyperplasia. Uma kwenzeka umthamo ongabanjwanga, kungcono ukugwema lelo nani ngokuphelele, futhi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo kufanele ukuthi umthamo ophuthelwe unxeshezelwe ngomthamo ophindwe kabili ngokuzayo. Lokhu kungaholela emiphumeleni ethathe isikhathi eside futhi engafuneki enamandla okuholela ezinkingeni ezicishe zibulale.
Ubani Okungafanele Asebenzise I-Tadalafil Powder
I-Tadalafil Powder inezinzuzo ezahlukahlukene nokusetshenziswa kepha yenzelwe ikakhulukazi ubulili besilisa, ikakhulukazi labo abangaphezu kweminyaka engu-18. Imithi akufanele ithathwe ngabesifazane nezingane ngoba kungenzeka babe sengozini enkulu yokuthola imiphumela emibi ethile ejwayelekile kanye nezinkinga ezihambisana nokusetshenziswa kwamandla kweTadalafil.
Abantu abalandelayo akufanele bathathe iTadalafil Powder, noma babonane nodokotela wabo ngaphambi kokuqala noma imuphi umuthi wesigaba sezidakamizwa se-PDE5 inhibitors:
Abantu abanomlando wokungenelela kokuhlinzwa ezinyangeni ezintathu ezedlule
Abantu abanomlando wezehlakalo zenhliziyo ezinyangeni ezintathu ezedlule kuye ezinyangeni eziyisithupha
Abantu abane-hypertension kanye ne-hyperlipidemia
Abantu abanezifo zezinso
Abantu abane-retinitis pigmentosa
Abantu abane-hemophilia noma ukuphazamiseka kwegazi okufanayo
Abantu abane-myeloma eminingi, noma i-leukemia
Abantu abanezilonda esiswini
Abantu abanomlando wokushaywa unhlangothi noma abanengozi eyengeziwe yokuhlaselwa yisifo sohlangothi
Laba bantu abavunyelwe ukuthatha iTadalafil ngoba imishanguzo yabo yamanje ingaxhumana nomuthi, okuholela ezinkingeni ezisongela impilo. Kwezinye izimo, imizimba yalezi ziguli ingaba sengozini enkulu yemiphumela emibi ejwayelekile futhi engeyona emibi yomuthi kepha ubukhulu bezinkinga bungaba ngaphezulu kunokujwayelekile.
Imiphumela emibi engaba khona yeTadalafil Powder
I-Tadalafil Powder, njengemithi eminingi, inemiphumela emibi ejwayelekile ehambisana nokusetshenziswa kwayo. Kodwa-ke, ayikho neyodwa yazo enzima, imisebenzi yempilo yansuku zonke eguqukayo, noma esongela impilo. Eqinisweni, iningi labo lizoxazulula lodwa futhi ngeke lidinge ukungenelela kwezokwelapha.
Imiphumela emibi ejwayelekile yeTadalafil ifaka, kepha ayikhawulelwanga ku:
Ukuqhuma; ukufudumala nokubomvu kwesikhumba
Tinnitus; umsindo ophikisayo wokukhala endlebeni
Umphumela wecala lokugcina ubucayi kakhulu futhi ubhekisa ekwakhiweni isikhathi eside futhi okubuhlungu okuye kwahlala, imvamisa ngaphezu kwamahora amane. Ezimweni ezinjalo, kunconywa ukuthi ufune usizo lwezokwelapha ngokushesha njengoba kungumphumela obucayi kakhulu, yize ungavamile, weTadalafil ukusetshenziswa.
Kusukela ngo-Okthoba ka-2007, i-FDA idinga ukuthi zonke iziqukathi zemithi ye-PDE5 inhibitor zifake ilebula lokuxwayisa elenza abasebenzisi bazi ukuthi le mithi inamandla okudala ukulahleka kwezindlebe kwesikhashana kodwa okungazelelwe. Lesi sinqumo se-FDA kube ngumphumela wezikhalazo eziningi zokulahleka kokuzwa ezigulini ezisebenzisa iTadalafil noma izidakamizwa ezifanayo ezibhaliswe ne-FDA, ezidinga ukuthi zihlaziye kahle le nkinga. Ucwaningo lwe-FDA luthole ukulahleka kokuzwa kungumphumela omubi we-TAdalafil abakholelwa ukuthi zonke iziguli kufanele zenziwe zaziwe, ngamagama acacile, ukuze bakwazi ukwenza isinqumo esinolwazi.
Ukulahleka kombono ngesinye futhi isikhalazo esivame ukuhlotshaniswa nokusetshenziswa kweTadalafil futhi lapho i-FDA ibheka lezi zikhalazo, kutholakale ukuthi lo mphumela wecala ubenzeka kakhulu ezigulini esezivele zinenkinga yamehlo, okuyi-non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy noma i-NAION. Njengoba bekungekho imbangela eqondile nomphumela otholwe yi-FDA, ayikho ilebula lokuxwayisa elihlobene nokulahleka kombono ku-Tadalafil powder noma amanye amalebula okupakisha we-PDE5 inhibitors.
Ukusebenzisana Okuvamile Kwezidakamizwa ne-Tadalafil Powder
Imithi ethile akumele ihanjiswe ndawonye njengoba ingasebenzisana nayo ngayinye okuholela ekunciphiseni komphumela wakho kokubili, umphumela owandayo wakho kokubili, noma ukukhulisa imiphumela emibi yayo yomibili le mithi.
I-Tadalafil Powder ingenye yemithi enjalo okungafanele ithathwe kanye nale mithi elandelayo.
Ama-Antacids: Le mithi ihlangana neTadalafil ngendlela yokuthi iholela ekwehliseni ukusebenza kahle kwalesi sidakamizwa sakamuva, yize inqubo eqondile ingakaqondakali. Kodwa-ke, kubalulekile ukuxwayisa iziguli ngokuxhumana okungenzeka phakathi kwale mithi emibili, ikakhulukazi njengoba umuthi wangaphambili ungumuthi ojwayelekile wasekhaya.
Ama-PDE5 Inhibitors: Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinendlela yokusebenza efanayo neTadalafil kungaholela ekwandeni okukhulu ekugelezeni kwegazi kanye nokwehla okusongela impilo komfutho wegazi. Ukuxuba ama-inhibitors amabili ahlukene we-PDE5 noma ukuthatha umthamo ophindwe kabili womuthi ofanayo kungaholela ezinkingeni kunezinzuzo ezingeziwe.
Utshwala: Ukuthatha i-Tadalafil powder ngotshwala akukwazi ukudala izinkinga ezithile kepha kungaholela ekwandeni okukhulu emandleni emiphumela emibi. Zingajwayelekile ukwenzeka kepha uma ziqiniswa, zingabekezeleleka futhi zingadinga usizo lwezokwelapha.
Ama-nitrate: Le mithi isetshenziselwa izinhliziyo futhi umsebenzi wayo omkhulu ukwandisa ukugeleza kwegazi ngemithambo yegazi ngokuba nomthelela we-vasodilatory kuyo. Le ndlela yokusebenza iyefana neyeTadalafil, yingakho ukuhlanganiswa kwalezi zidakamizwa kubangela ihaba lemiphumela emibi yazo zombili izidakamizwa.
Ama-anti Hypertensives: Isizathu salokhu siyefana nesama-nitrate. Ama-anti hypertensives kanye ne-Taladafil womabili asebenzela ukunciphisa umfutho wegazi ngemithambo ye-vasodilating, okuthi uma ihlanganiswa, iholele ekucindezelekeni kwegazi okuphansi kakhulu okungaholela ekufeni, uma kungalashwa.
I-CYP3A4 Inducers: I-CYP3A4 yi-enzyme ebhekele ukukhishwa kwengxube yeTadalafil emzimbeni ngemuva kokufeza injongo yayo. Kodwa-ke, umuthi owandisa imiphumela yale enzyme ngenxa yalokho ungaholela ekukhulisweni kweTadalafil, nangaphambi kokuba ikwazi ukufeza inhloso yayo. Lokhu kwenza lokhu kokugcina kungasebenzi futhi kungasizi ngalutho.
Ama-CYP3A4 Inhibitors: Noma imuphi umuthi ovimbela isenzo se-CYP3A4 enzyme kungaholela ekwehlisweni kokukhishwa kweTadalafil okungayishiya ohlelweni lomuntu isikhathi eside kunesidingo. Lo mphumela owathatha isikhathi eside awudingekile futhi unamandla okuba yingozi ngokuphelele, yingakho ukuhlanganiswa kwalaba ababili kufanele kugwenywe ngazo zonke izindlela.
AmaGuanylate Cyclase Stimulators: Le mithi ikhomba ukucubungula kwamaphaphu, kuhlose ukunciphisa ingcindezi yegazi eligeleza ngayo. Kodwa-ke, lokho futhi kungenye yemiphumela ezuzisayo nokusetshenziswa kweTadalafil. Ukuthatha laba bobabili ndawonye kungaholela ekucindezelweni kwegazi okuphansi ngokweqile, okungaba yingozi uma kungalashwa ngokufanele nangesikhathi esifanele.
Ithengiswa kuphi iTadalafil Powder?
Ukuhweba okuphelele kweTadalafil Powder kuvame kakhulu kunokuthengisa okudayiswayo njengoba kuvame ukuthengwa ngobuningi ngqo kusuka kufektri yomenzi weTadalafil Powder. Ngokuvamile, imishanguzo yemvelo enjalo eyimfihlo ivame ukuthengwa ku-inthanethi njengoba inikeza iziguli ukuqonda nokuzimela ezikudingayo. Imithi itholakala cishe kuwo wonke amakhemisi endawo nawaku-inthanethi kepha iziguli zidinga ukuthola incwadi kadokotela ukuze zikwazi ukuwuthenga.
Ucwaningo Oluqhubekayo Lwezokwelapha Nemininingwane
I-Tadalafil icwaningwa njalo futhi ifundelwa ukuhlola noma ikuphi okunye ukusetshenziswa komuthi okungenzeka kube khona. I-Tadalafil iyinhlanganisela eyisihluthulelo emithini eminingi ehlukahlukene kadokotela, yonke ithengiswa ngaphansi kwamagama emikhiqizo ehlukene, ikakhulukazi ngezifo ezifana nokungasebenzi kahle kwe-erectile, i-benign prostatic hyperplasia, ne-pulmonary arterial hypertension. Kodwa-ke, kunezifundo ezahlukahlukene ezigabeni zazo zokuqala ezikhombisile ukuthi iTadalafil, ngokuzayo, ingahle ibekelwe nezinye izinkinga.
Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu esenziwa eTadalafil sigxile ekusebenzeni nasekuvikelekeni kwayo uma sisetshenziswa nsuku zonke yiziguli ezinenkinga yokungasebenzi kahle kwe-erectile. Ucwaningo lushicilelwe kwi-Indonesian Health Journal, futhi ngokususelwa ekuhlaziyweni kwabaphenyi kwezincwadi ezivela kulwazi lwe-elekthronikhi, kuphethe ngokuthi ukusebenzisa iTadalafil kanye ngosuku kusebenza kakhulu ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile kunokusebenzisa umuthi lapho kudingeka.
Isizathu sokuthi kungani lolu cwaningo lubaluleke kangaka ukuthi lunamandla okushintsha imigomo yokwelashwa yokungasebenzi kahle kwe-erectile. Kodwa-ke, kufanele kwenziwe ezinye izifundo ngaphambi kokuba kwenziwe ushintsho ezinhlelweni zokwelashwa.
Olunye ucwaningo olwenziwe ngeTadalafil luhlose ukubuyisa umuthi wokuvuselela ucansi, kanye nomuthi wesigaba esifanayo, i-vardenafil, ozosetshenziswa ekwelapheni ukuphazamiseka kwethambo. Ukuphazamiseka kwethambo lapha kubhekisa ezinkingeni lapho amaseli e-osteoclast noma abulala amathambo esebenza ngejubane eliphakeme nangokusebenza ngokungenakuqhathaniswa nokusebenza kwamaseli e-osteoblast noma amathambo. Lokhu kubangela ukwehla kwamathambo okwenza iziguli zithambekele ekuqhekekeni kwezifo.
Isigaba se-in vivo sesifundo sikhombise ukuthi yomibili le mithi ayikwazi ukwandisa umsebenzi wama-osteoblast kuphela kepha futhi yehlise umsebenzi wama-osteoclast ngasikhathi sinye. Izidakamizwa ziyakwazi ukwenza lokhu ngoba indlela ye-PDE5A ibalulekile ekukhiqizeni ibhalansi yazo zombili izinhlobo zamaseli. Indlela efanayo yilokho izidakamizwa eziqondiswe ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile. Ngemuva kokusetshenziswa kwemiqondo ye-in vivo kumamodeli ezilwane ngabaphenyi abahola lolu cwaningo, kutholakale ukuthi yomibili le mithi iyindlela efanelekile yokuphathwa kwethambo elinempilo. Kodwa-ke, kufanele kuqhutshekwe nezifundo ngemiphumela yazo zombili izidakamizwa emathanjeni abantu.
Ukuhlaziywa kwe-meta okushicilelwe ku-Endocrinology Journal kuqhathanise ukusebenza kahle kokwelashwa kwe-tadalafil, ukwelashwa kwe-tamsulosin, kanye ne-tamsulosin kanye nokwelashwa kwe-tadalafil ekusizeni ukuxoshwa kwamatshe e-urethral. Inhloso yocwaningo bekungekhona nje ukuthola izindlela zokwelapha ezintsha zokuhlanganisa ukusiza iziguli ezinamatshe okubeletha kepha nokuhlola ukuphepha kwalezi zinhlelo zokwelashwa.
Ukusetshenziswa kwe-tadalafil kuphela noma i-tadalafil ne-tamsulosin kwakuyizinketho ezimbili ezitholakale zisebenza kahle kakhulu futhi zinamathuba amancane okuveza umphumela omubi. Ngaphezu kwalokho, imiphumela ye-analgesic yeTadalafil ingakwazi ukudambisa izinhlungu ezigulini eziningi ezinokuhlangenwe nakho kwamatshe we-ureteral ngenkathi umuthi futhi usiza ukukhipha itshe ohlelweni.